दिल्लीमा इपीजी बैठक जारी
काठमाडौं, २७ पुस । नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको संयुक्त बैठक भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको छ । दिल्लीको इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स एण्ड एनालाइसिस (आइडीएसए) भवनमा दुई दिने बैठक बिहीबारदेखि सुरु भएको हो ।
नेपालमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि बसेको इपिजीको यो पहिलो बैठक हो । बैठकको पहिलो दिन पाँचौ बैठकसम्म छलफल भएका विषयहरूको समीक्षा र दोश्रो दिन छलफल गरिने एजेण्डा तय छ ।
नेपाली पक्षका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले नेपालको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने गरी छलफल अघि बढाउन समूह तयार रहेको बताए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रबुद्ध समूहलाई बैठकमा सहभागी हुन आउनु अघि सोही अनुरुप निर्देशन दिएका थिए ।
बैठकमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषयमा आएका राय र चासो लगायत सीमा, डुबान, व्यापार सम्झौतालगायत विषयमा थप छलफल हुने छ । दोश्रो दिन शुक्रबार भारतका तर्फबाट प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामाले नेपालमा भारतीय सहायताका बारेमा प्रस्तुति दिने छन् ।